အလေးထားပြီး ရေးစေလိုပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » အလေးထားပြီး ရေးစေလိုပါတယ်။
Posted by ခင္ခ on Jul 12, 2012 in Society & Lifestyle | 25 comments
MG မှာပိုစ့်တွေရေးသားနေကြသော ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ မိမိရေးသားတင်နေကြတဲ့ ပိုစ့်အားလုံး အတွက် စာဖတ်ပရိတ်သတ်အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံကြည်စွာပြောရဲပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်စာဘဲရေးရေး မြင်နိုင်တဲ့နေရာ၊ ဖတ်လို့ရတဲ့နေရာမှာ ထားထားလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဆိုတာ ရှိကိုရှိပါတယ်။ ဖတ်ရှုသွားတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အနည်း အများသာကွာခြားပေမယ့် စာဖတ်ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ဘဲ ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီတစ်ယောက်ကို အလေးထားပြီးရေး ရပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ – တစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်မျိုးစဉ်းစားရအောင် – ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူကြိုက်နှစ်သက် နေတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း ဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့ ရည်းစားစာရေး ပြီးပေးမယ်ဆိုပါဆို့၊ အဲဒီကောင်ကလေးရဲ့ရည်းစားစာကိုဖတ်စေမယ့် ကောင်မလေးကို အလေးထားတဲ့အသုံးအနှုန်းလေး တွေနဲ့ရေးမလား စော်စော်ကားကား ရေးမလား စဉ်စားကြည့်ပါ ဘယ်လို ရေးသင့်လည်းဆိုတာကို။
ရေးသားထားတဲ့စာတိုင်းမှာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်စာကိုဖတ်မယ့် ပရိတ်သတ်ကို ဘယ်လိုခံစားမှု့တွေ သုတ၊ရသတွေ ဖြစ်စေချင်တာလ၊ဲ ကိုယ့်စာကိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုတုန့်ပြန် စေချင်တာလဲ ဒါရေးသားမတင်ပြခင်စဉ်စားရမယ့် အချက်ပါဘဲ။ ကိုယ့်စာကိုဖတ်ပြီး တဖက်လူ ငြိမ်းချမ်းရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ခံစားမှု့ဆိုတာအမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် စာဖတ်ပရိတ် သတ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးခံစာစေချင်တာလဲ ပေါ်ဘဲမူတည်မှာပါ။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို လွမ်းသွား စေချင်တာလား၊ ရယ်မောစေချင်တာလား ဒေါသဖြစ်သွားစေချင်တာလား သနားသွားစေချင်တာ အသိပေးတဲ့သတင်း သဘောမျိုးဘဲ အသိပေးစေချင်တာလား ကိုယ်ခံစားမှု့ကိုမျှဝေစေချင်တာလား ဆိုလိုတာက သနားစေချင်အောင်ရေးရမယ့်နေရာမှာ ဒေါသဖြစ်အောင်အမြင်ကပ်အောင်ရေးမိရင် ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ ဒီလိုမျိုးတွေးပြီးရေးကြစေချင်တာပါ။
ဥပမာ – ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့သူတောင်းစား တယောက်က စကားမပြောတတ်တော့ စာရေးပြီး သူရဲ့ရှေ့မှာ ပိုက်ဆံထဲ့ဖို့ခွက်တစ်လုံးချတယ်၊ အဲဒီခွက်တစ်လုံးရှေ့မှာ စာရေးထားတဲ့ ကဒ်ထူလေး ထောင်ပြီး လူအသွားလာများတဲ့နေရာမှာ ပိုက်ဆံ တောင်းတယ်ဆိုပါဆို့။ သူရေးထားတာ အကိုကြီးတို့၊အမကြီးတို့ရယ် ကျွန်တော် စကားမပြောနိုင်လို့ဆွံအနေတဲ့ ဒုက္ခိတမို့ ပိုက်ဆံလေး သနားခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။ သူစာကိုဖတ်ဖြစ်တဲ့စာဖတ်တဲ့သူတွေ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ သနားတဲ့ သူတွေက ပိုက်ဆံလှုသွားကြမှာမဟုတ်လား၊ အဲဒီနေရာမှာ ဒီလိုပြောင်းရေးပြီး ပိုက်ဆံတောင်းမယ် ဆိုရင်ကော- ဟေ့လူတွေ ဒီမှာဒုက္ခိတတစ်ယောက်ထိုင်နေတာ ပိုက်ဆံထဲ့သွားလေဗျာ။ ဒီလိုဆိုရင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ရေ ပိုက်ဆံလှုဖို့နေနေတာတာ စိတ်ထဲက သူတောင်းစားကများ—–။ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိနိုင်ဘူးလား။
နောက်ဥပမာတစ်ခုက – ဝန်ထမ်းအလုပ်ခေါ်စာတွေ သတင်းစာထဲမှာထဲ့ကြတာဖတ်ဖူးမှာပါ။ အဲဒီခေါ်စာမှာ ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည် အသက်အရွယ်ကဘယ်လောက် ပညာအရည်အချင်းကဘယ်လို ဘာလုပ်တတ်ရမယ် ဘာတွေကျွမ်းကျင်ရမယ် စသည်ဖြင့်ရေးပြီး စိတ်ဝင်စားသူက ဘယ်လိပ်စာကို ဆက်သွယ်ရမယ်ပေါ့။ အလုပ်ရှာနေတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်က ဖတ်ပြီးလို့ စိတ်ဝင်စားရင်အဲဒီလိပ်စာ အတိုင်းသွားမှာပေါ့။အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဒီလိုရေးပြီးဝန်ထမ်းခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စာဖတ်ပရိတ်သတ် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်ထင်လဲ ဖတ်ကြည့်ရအောင် – အလုပ်လုပ်ဖို့လူအလိုရှိသည် အသက် ၂ဝ မှ ၃ဝ ကြား၊ ဘွဲ့ရပြီး အတွေ့အကြုံရှိရမည်၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူ ငါ့ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ။ ရုံးလိပ်စာက——-။ ဒါမျိုးကြော်ငြာခဲ့ရင် အဲဒီအလုပ်ရှင် ဝန်ထမ်းကောင်းရနိုင်သလားစဉ်းစာကြည့်ပါ။
တစ်ခါကကျွန်တော် စာတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်တယ် အဲဒီစာရေးတုံးကတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အပျော်အပြက် သဘောမျိုးရေးလိုက်တာ ဒါပေမယ့်စာဖတ်တဲ့သူထဲက ကျွန်တော်ကိုအဲလို နောက်တောက်တောက် စာတွေရေးရမလားဆိုပြီး ဝေဖန်လာတာသိရတော့ ကျွန်တော်အားနာ သွားမိတယ်စာဖတ်ပရိတ် အပေါ်အလေးမထားဘဲရေးလိုက်မိပါလားဆိုပြီးတော့ စိတ်ထဲက အဲဒီစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို တောင်းပန်မိသွားတယ်။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ စာရေးဆရာဦးသုမောင်နဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာတခါထိုင်ဖြစ်တုန်းက စကားစမည်ပြောရင်းနဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်နဲ့ပါက်သက်ပြီး သူပြောတာလေးကိုသတိရမိတယ် ကိုယ်စာတစ်ခုရေးပြီးတိုင်း စာဖတ်ပရိတ်သတ်ရှိတယ်တဲ့၊ ကိုယ့်လူစဉ်းစားကြည့်လေ ကိုယ်စာရေးပြီးရင် ဘယ်သူဖတ်လဲ ကိုယ်ဖာသာပြန်မဖတ်ဘူးလား၊ ဒါဆိုအဲဒီစာအတွက် စာဖတ်ပရိတ်သတ် ရှိသွားပြီပေါ့တဲ့။ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ရေးတဲ့စာက စာဖတ်သူကို မလေးမစားရေးထားရင် ကိုယ့်ကို ကိုယ်လည်း မလေးစားတဲ့သဘောတဲ့။ အဲဒီတုံးကတော့ ဒီလိုဘဲစကားဝိုင်းမှာနားထောင်လိုက်တာ အခုမှသူပြောတာတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပါလားလို့ သိလာတာပါ။
ဒါကြောင့် ပိုစ့်တွေ၊ ကွန့်မန့်တွေရေးကြမယ်ဆိုရင် ဖတ်ရှုကြမယ့် စာဖိတ်ပရိတ်သတ်ဆိုတာရှိနေမှာ ဖြစ်ပြီး စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို အလေးထားပြီးရေးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်————။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ……. အခုလိုမိမိဖြစ်ဖူးတဲ့အမှားလေးကို တစ်ပါးသူများ သိအောင်ဝေမျှပေးတဲ့ ကိုခင်ခကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …. ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရရင် ကိုယ်ဖတ်မိတဲ့ပို့စ်တစ်ခုကို ကိုယ်မကြိုက်ရင် မကြိုက်တာကို တစ်ခါတစ်ရံပေါ်တင်ရေးသလို တစ်ခါတရံလဲ မဝေဖန်တော့ဘူး ……… တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေချင်လို့ရေးတာမဟုတ်ပဲ အရေးအသားမတတ်လို့ ရေးမိတာမျိုးလို့ပဲ နားလည်ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ပဲ အားလုံးကို မေ့ထားလိုက်ပါတယ် ……..
ကျနော်ကတော့ ပဒီးပဒါး အရေမရ အဖတ်မရလေးတွေ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့စာဖတ်သူကို စော်ကားလိုစိတ်ရယ်လိို့တော့မထားမိပါဘူး၊ ကျနော့်စာကိုဖတ်ပြီးနဲနဲလောက်ပြုံးစိစိလေးဖြစ်သွားရင်ကျေနပ်ပါတယ်။ စာတစ်ပုဒ်ကိုကြိုက်သူရှိသလိုမကြိုက်သူလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့စာတွေကိုဘယ်သူမှခံစားလို့မရတဲ့စာမျိုးလေးတွေတစ်ခါတစ်ရံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်းဘီဂင်နာတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့သဘောပါ၊ကျနော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ ရေးသက်ရသွားရင် အလိုလို ပြင်သွားမှာပါ။ မန့်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ တချို့စာတွေကပြန်ဆွေးနွေးရမဲ့ အကြောင်းအရာမဟုတ်တာတွေလည်းရှိပါရဲ့။ တချို့ကျတော့လည်းကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းအရာ မဟုတ်တော့ ပြန်မဆွေးနွေးနိုင်ပဲဝင်ဖတ်သွားကြောင်းလေး ရေးသွားတာမျိုးလည်းတွေ့တယ်။ ရင်းနှီးမှုနဲ့ အပြန်အလှန် မန့်ပေးကြတာမျိုးပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မန်းဂေဇက်ဟာ နေပျော်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တာတော့အသေအချာပါပဲခင်ဗျာ။
ဘာတွေခံစားနေရမှန်း မသိတော့ ၊ ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ။ စာရေးခြင်းပေါ်မှာကျွန်မတို့ စွဲလန်းမိသွားတာ ဒီဂေဇက်ကစလို့ပါပဲ ။ အရင်ကတော့ လက်ကအငြိမ်ကို မနေနိုင်တာ ရေးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ …. ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ပို့စ်တွေက တအားကောင်းကောင်းလာတော့ ၊ အပျော်ပျက်ရေးရမှာကိုပဲ … လက်မရဲသလိုလိုဖြစ်လာတာလား ၊ စာဖတ်သူကိုပဲ အားနာမိတာလာ … ဘာစိတ်လည်း မသိပေမယ့် … ထိန်းရေးဖြစ်တာတော့ အသေချာပါ … ။
ကျွန်မတို့တွေ ရေးရင်းနဲ့ အွန်လိုင်းက မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တော့ စကြနောက်ကြတာမျိုးလည်း ရှိမယ် …. ။ စိတ်ခံစားမှုကိုလိုက်ပြီး အပျော် ကော့မန့်ပေးတာတွေလည်း ရှိမယ် .. ဒါပေမယ့် … ဒါတွေက စာရေးသူကိုရော ၊ စာဖတ်သူတွေကိုပါ မလေးစားတာမျိုးမဟုတ် ၊အလေးမထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး … ခင်မင်မှုစိတ်ခံစားချက်အရ စာစီထွက်လာတာမျိုးဆိုတော့ .. တစ်ခါတစ်လေ အလေးမထားသလိုများ ဖြစ်သွားတတ်တာများလား ……….. ။
မအိတုံရေ ခံစားရလို့ဒီပိုစ့်လေးရေးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ စာရေးသားကြတဲ့သူတွေအတွက် စာဖတ် ပရိတ်သပ်ဆိုတာရှိတတ်တယ်မို့ ပိုစ့်ကောင်းကောင်းလေးတွေရေးပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့သဘော ရေးသားထားတာပါ။ စာရေးတဲ့သူဆိုတာ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ဝေဖန်ခွင့်ပေးသင့်သလို ဝေဖန်အကြံပြုခြင်း ကိုလည်းကျေနပ်စွာလက်ခံရမယ်လေ၊ ဝေဖန်အကြံပေးမှု့ဟာ နောက်ရေးတဲ့စာအတွက် စဉ်းစားစရာကုန်ကြမ်းပါတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝေဖန်တဲ့သူတွေ၊အကြံပေးတဲ့သူတွေ၊မန့်တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် နောက်စာရေးဖို့ အရင်းရလို့ပါ။
ကိုယ်တိုင်စာဖတ်သူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေး အတော်ကိုကြိုက်သွားတယ်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ ရည်းစားစာကို ပို့စ်လုပ်မတင်ကြသေးတာဘဲ တော်လှဘီလို့ပြောရမလိုပါဗျာ။ စာ၂ကြောင်း အများဆုံး ၃ကြောင်း (အပို်ဒ်ခွဲထားလို့)လောက်နဲ့ ပို့စ်လုပ်ပြီးတင်နေတာတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကို သည်းခံ ပိုက်ဆံကုန် အချိန်ကုန်ခံ ပြီး MG ကစာကိုမှ တကူးတကန့်ဖတ်ချင်သူတွေ ဖတ်နေသူတွေ(ကျမအပါအဝင်)အတွက် အတော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ကော်မန့်ကိတ်စက တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရင်းနှီးလို့ ပြောမိကြတာမျိုးဘဲများပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေကို မလေးစားတဲ့သဘောဆောင်သွားတာအတွက်တော့ ကြိုးစားပြီးဆင်ခြင်ကြရမှာပါဘဲ။
Khaing Khaing ၊ P chogyi ၊ ကြောင်လေး ၊ etone ၊ ဇောက် ထိုး ၊ Shwe Ei ဖတ်ရှု့ခြင်းအတွက်ရော၊ ကော်မန့်ပေးကြတာအတွက်ရော ကျေးဇူးနော်။
ခင်မင်လျှင် – ခင်ခ။
သိပ်မှန်တဲ့ပို့စ်လေးပါဘဲ ကိုယ့်မှာစာဖတ်ပရိသတ် တစ်ယောက်မှမရှိဘူးဆိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အလေးထားရမယ် ငါ့စက အမှားရှိနေသေးလို့ ငါကြိုးစားရေးရမယ် တစ်ခါမကောင်းရင်နောက်တစ်ခါကောင်းအောင် ရေးရမယ် စနိုးကိုအားပေးနေတဲ့စာဖတ်ပရိသတ် ၁ဝယောက်လောက်ဘဲအခိုင်မာရချင်တယ် ရေးသားချက်ကညံ့တော့ တစ်ယောက်မှတောင်မရှိဘူးလို့ ထင်မြင်မိတယ် ခုနောက်ပိုင်းတော့ MGကိုဝင်လိုက်တော့မှ ကိုယ်ရေးတဲ့စာလေးကို လာဖတ်ပေးတော့အားတက်ရပါတယ် ….
ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေက အတော်မှန်ပါတယ်။ စာရေးသူဆိုတာ စာရေးဝါသနာပါလို့ ရေးကြတာ များပါတယ်။ ဝါသနာပါလို့ ရေးတဲ့အခါ ငါ့စာမူကို ဖတ်ပါ့မလားဆိုတာကို ထည့်စဉ်းစားလေ့မရှိကြပါဘူး။ မရေးရမနေနိုင်လို့ ရေးကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရေးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်က အများကို ဘာပေးနိုင်မလဲ။ ကိုယ်ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာက အများအတွက် ဘာအကျိုးကျေးဇူးရရှိသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ စာအရေးအသား ညံ့ချင် ညံ့မယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတော့ ထည့်သွင်းပြောမှာပါပဲ။ ဒီတော့ မနောအနေနဲ့ကတော့ ပြောချင်တာတွေ၊ စိတ်ထဲရှိတာတွေ၊ နောက် ကိုယ်သိတာတွေ ဆက်လက်မျှဝေသွားဦးမယ်လို့ ပြောချင်ပါတော့တယ်။
ဒီဂေဇက်က စာပေဝါသနာပါသူတွေအတွက် လက်သွေးလို့ရတဲ့ နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။ မွန်မွန်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာလေးတွေကို (ပလန်းနက်ပြီးရင်) ဒီဆိုက်ထဲမှာမှ တစ်စိုက်မတ်မတ် တင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒီရွာထဲမှာ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ဖတ်ပေးမယ့်၊ ဝေဖန်ပေးမယ့်၊ မှားတာရှိရင် စေတနာနဲ့ ပြင်ပေးမယ့် လူကြီးတွေရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီးတော့လည်း အတုယူလို့ရတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးမှာ ကိုယ့်ဘက်ကသာ အမှန်အကန်ကြိုးစားရင် တကယ်တိုးတက်နိုင်မယ့်နေရာလို့ မြင်မိပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခရေ .. ငုံလည်း စာတွေရေးထားတာ ရှိပေမယ့် အထပ်ထပ်အခါခါဖတ်ရင်း သင့်မှသင့်တော်ပါ့မလား ရွာထဲကလူတွေ ကြိုက်မှကြိုက်ပါ့မလား စဉ်းစားနေရလို့ Post တောင် မတင်ဖြစ်ပါဘူး ကိုယ့်ရှေ့က ရှိနေတဲ့ စီနီယာတွေ ဘယ်လိုရေးကြတယ် ဘယ်လိုဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတာကို နှောကျေအောင် ဖတ်မှတ်နေပါတယ် …
အမှန်ပါဘဲဗျာ။ကျနော်လဲ နောက်ပိုင်းပို ့စ်တင်ရမှာ စဉ်းစားမိတယ်။
ကိုယ်ရေးတဲ့စာက တစ်ခုခု မက်ဆေ့ချ်ပေးနိုင်အောင်ပါ။
ကျမတို့လည်း စာဖတ်ဖို့ ဝါသနာပါလို့သာ ဒီ ဂေဇက်ကို ရောက်လာကြတာပါ။
စာရေးဖို့ ကလောင်သွေးခွင့် လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ရတာလည်း ဒီဂေဇက်ရဲ့ အရသာပါဘဲ၊
ဂေဇက်ကို တည်ဆောက်ထားတာ သူကြီးဆိုပေမယ့် ကျမတို့ စာရေးသူဖတ်သူတွေမှာလည်း ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါလေးကို အားလုံး အလေးထားကြဖို့ သတိပေးရင်း ကိုခင်ခကို ထောက်ခံပေးချင်ပါတယ်။
ကိုခင်ခ ရေးထားတာကို သဘောတူပါတယ်
အဲဒီကိစ္စနဲ ့ပတ်သက်ပြီး.. အချိန်တန်ရင်
အလိုလို နားလည်သွားကြမှာပါလေ ဆိုပြီး
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ..တခါတခါ ကိုယ်ရေးချင်တာကို ရေးချလိုက်..မန့် ထဲ့လိုက် လုပ်တတ်တဲ့
ကျွန်တော့် အကျင့်လေးလဲ ပြင်လို့အချိန်မှီအောင် သတိပေးလိုက်သလိုပါဘဲ..ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ.။
တခါတခါ မရည်ရွယ်ဘဲ စာဖတ်သူကို စော်ကားမိတာမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်
ဒီနေရာကနေ မှတ်မှတ်ရရ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
ကိုခင်ခ ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ် ..
စာရေးသူဟာ ပို့စ်ပဲ ရေးရေး ကွန်မန့်ပဲ ရေးရေး စာဖတ်သူကို လေးစားရပါမယ် ..
နောက်ထပ် ရသ လည်း ပေးနိုင်ရပါမယ် …
ပြီးတော့ စာရေးသူတွေဟာလည်း သူ့ကဏ္ဍအလိုက် ရေးနေကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ..
အပြောင်အပျက် ရေးတိုင်း စာရေးသူကို မလေးစားဘူးလို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး …
ဥပမာ အနေနဲ့ .. လူရွှင်တော်တွေရဲ့ အလုပ်က သူ့ပရိသတ်ကို ဟသရသ ပေးနိုင်ဖို့ပါ …
ဤသို့ သိသလောက် မန့်ခဲ့ပါတီ …
စာလုံးတွေနဲ့နောက်မှာ စာရေးသူရဲ့မနော တံခါးပွင့်နေတယ်တဲ့။
ဒီ မနောလေးကို ဖတ်တတ်သူတွေက စာရေးသူ ရေးထားတဲ့စာကို
သာမက မရေးထားတဲ့ အတွေးစကားတွေကိုလည်း ဖတ်သွားတတ်တယ်တဲ့။
Read between the lines. လို့ ခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ကိုခင်ခပြောသလို အလေးထား၊ စေတနာထား ရေးသွားကြမယ်ဆိုရင်
နောက်ကြာလာတော့ကို်ယ်စာကိုဖတ်နေတဲ့ ပရိသတ်ရှိတဲ့အခါ ပြီးစလွယ်ရေးဘို့လက်တွန့်လာပါတယ်.
ဒီပိုစ်လေးက အခုတလော ရေးချင်သလိုရေးနေတဲ့ဂေဇက်အတွက်
ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာဟာ ကိုယ့်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာဟာ သူတပါးကို မထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လက်စမ်းစာပေ ဆိုတော့လည်း ပရိုတွေလို အဆင့်မှီချင်မှ မှီမှာ ဖြစ်ပေမယ့်
သုတ ရသ တခုခု ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။
လူတကိုယ် စိတ်တမျိုး ဆိုတော့ နှစ်သက်သူလည်းရှိ
မနှစ်သက်သူလည်း ရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရမှာပါ။ [O:]
ကိုယ်ရေးတဲ့စာအပေါ် မှာ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့
တစ်ခုခု ရစေချင်တာအမှန်ပါ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာရှိပြီး
ချရေးဖို့ အတော်လေးကို ခက်ခဲပါတယ် ဒီမန်းဂေဇက်က
စာပေဝါသနာ ပါအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဆိုဒ်လေးဆိုလဲ
တချို့ စာရေးသူတွေက ရေးချင်တာရေးတာရေးပီးတင်တော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို စော်ကားသလိုဘဲ
စာလေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ပိုစ့်တင်တဲ့သူတွေကလည်းရှိသေး၊ မြှောက်ပေးတဲ့ဟာတွေကလည်းရှိသေးဗျ ထောင်တောင်ထောင်တောင်နဲ့ ဆရာလိုလို သမာ္ဘလိုလိုနဲ့ သောက်ချိုးကိုမပြေဘူး။
စာဖတ်တဲ့သူတွေကို သောက်ချင်တွေများမှတ်နေလားမသိ ၊ မပြောချင်လို့ကြည့်နေတာကြာဘီ ။
ကိုအောင်ဘုကြီးဝင်မဆဲရင် ကျုပ်ဆဲတော့မယ် ။
လီးလိုလို မှိုလိုလိုတော့လာမလုပ်နဲ့ ။ မန်းဂေဇက်ထဲမှာ ရေးချင်တာရေးရအောင် မင်းအမေလင်ပိုင်တဲ့ဆိုဒ်များမှတ်နေလား။
နီချင်တဲ့သူနီလို့ရတယ် ၊ ဖျက်ချင်ဖျက်လို့ရတယ်၊
ကျုပ်ဂေဇက်မှာဖတ်ဖြစ်နေတာ (၂)နှစ်ကျော်နေဘီ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရွာရဲ့ ကွာလတီကျနေတယ် အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး။
mushroom လိုလို နဲ့
မြှောက်ပေးတဲ့ဟာတွေကလည်းရှိသေးဗျ ထောင်တောင်ထောင်တောင်နဲ့ ဆရာလိုလို သမာ္ဘလိုလိုနဲ့ သောက်ချိုးကိုမပြေဘူး။
ကြောက်ပါပြီဗျ၊ နောက်မလုပ်တော့ဘာဘူး။( ဆဲတာနဲ့ပက်သက်ပြီး နောက်တစ်ချိန်ပိုစ့်ရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းရလို့ကျေးဇူးပါ ဦးဘဲဥ)